ဒဏ္ဍာရီ Tue Mar 30, 07:21:00 PM GMT+8
ဟားဟား....... ဂွတ်တယ် မမရေ... စစချင် ဗူးသီးနဲ့ ဖရုံသီး ရေလည်မိုက်တယ်။း) စားစရာတွေ မြင်တော့ သွားရည်ကျတယ် ခုမှ ရုံးကပြန်ရောက်ပြီး ဗိုက်ဆာနေလို့။ တိမ်တွေကလည်း လှပါတယ် ကင်မရာ မကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး ဓါတ်ပုံရိုက်နေတာ သူတို့က ငြိမ်ငြိမ်မှ မနေတာကိုး......။ အောက်ဆုံးက ပဲနီလေးပုံက သေးနေတော့ အားမရပါ။း))
ပျော်စရာကြီး မမရေ.... မမပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး အပျော်တွေ ကူးသွားလို့ စသွားတာနော်။
9-9 Tue Mar 30, 07:22:00 PM GMT+8
ညအိပ်ပျော်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်း)))
♥ကိုဇော်♥ Tue Mar 30, 07:32:00 PM GMT+8
“ဘာလီရဲ့ တိမ်တွေကို အမိအရ ဖမ်းဆုတ် ရိုက်ခတ်ပစ်ခဲ့တယ်...”
ဆိုတဲ့ ပုံလေးအောက်မှာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ချစ်မကြီးကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါ...ခိ..ခိ..:P
ကမ္ဘာမြေရဲ့ တစ်နေရာက ချစ်သူက ပြောဖူးတယ် အမရေ. . .
သူက ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်တယ်တဲ့....
ကျနော်က ညနေခင်းလေးတွေ လမ်းလျှောက်ရတာ ကြိုက်တယ်..
ဒါကြောင့် ညနေခင်း ကမ်းခြေမှာ လမ်းလျှောက်ကြမယ်လို့....ပေါ့..။
အခုတော့လည်း. . . . . . . . . . . .အင်း...
သူများတွေကိုပဲ. . .အား. . ကျ. .သွားပါတယ်ဂျာ...
လုလု Tue Mar 30, 07:40:00 PM GMT+8
မချစ်ကြည်ရေ့့့ အားကျလိုက်တာ။ အရမ်းကို ပျော်မှာပဲနော်။
လူပုံကတော့ သေးနေလို့ မညင်ရဘူး။
rose of sharon Tue Mar 30, 07:59:00 PM GMT+8
ချစ်ကြည်အေးကရှစ်ရှာလေးတော့... ဂျပန်စတိုင်နဲ့ရီတဲ့ပုံလေးလည်းတင်ဦးလေ... :)
ဂျစ်တူး ( မုံရွာ ) Tue Mar 30, 09:03:00 PM GMT+8
သိင်္ဂါကျော် Tue Mar 30, 09:57:00 PM GMT+8
တော်တော် ပျော်လာတယ် ထင်ပါရဲ့နော်..
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာတောင် ပျော်စရာကောင်းနေတယ်..
ဝက်ဝံလေး Tue Mar 30, 10:01:00 PM GMT+8
ဟမ် အဲဒါ မချစ်ပုံလား မီးကမသိပါဘူး မချစ်က ပို့စ်ထဲမှာ ဝက်မလွတ် ဘာညာ သရာကာ ရေးထားတော့ ဝ တယ်ထင်နေတာ ဝ လဲ အဝဘူး ရယ် လှလှလေးတော့ အဟီးးး
အပြန် မီး အတွက် ဘာလီ အချိုရည် သယ်ခဲ့ ဒါဗြဲ တာ့တာ
ပျော်နေတာ မလိုနာဘူး ဟွင့်
Anonymous Tue Mar 30, 10:18:00 PM GMT+8
နှစ်ကိုယ်ခွဲ သုံးကိုယ်ခွဲ ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်
အပြုံးပန်း Tue Mar 30, 10:28:00 PM GMT+8
ဘာလက်ဆောင်များ ပါလာလဲ မသိ။
သက်ဝေ Tue Mar 30, 10:52:00 PM GMT+8
သူများ အချစ်ဆုံး တိမ်တွေကို မလှအောင်ရိုက်လာတာ
ဘယ်သူလဲကွ... ခွိခွိ... ... ...
သိပ်ပျော်လာတယ် ပေါ့လေ... ဒီမှာတော့ ရှင် မရှိလို့ လွမ်းလဲ လွမ်း ပျင်းလဲ ပျင်းနေတာ ၄ ရက်ရှိပြီ... (ပါလာသမျှ မုန့်များအတွက် ရည်ရွယ်၍ လွမ်းနေခြင်းသာ ဖြစ်သည်...)
နောက်နေ့လဲ ပိုစ့်တွေ ဆက်တိုက် တင်ပါ... မျှော်နေမယ်...း))
SHWE ZIN U Tue Mar 30, 11:37:00 PM GMT+8
ညီမ ချစ်ကြည်အေး လှလှလေးရေ
Rita Tue Mar 30, 11:38:00 PM GMT+8
ဇွန်မိုးစက် Wed Mar 31, 12:35:00 AM GMT+8
ရီတာ တွေ့ပြီမလား...အဲဒါ အစ်မချစ်ကြည်အေးဆိုတာ။ ;)
အစ်မတောင် ဘာလီက ပြန်ရောက်လာလို့ ပို့စ်တွေဘာတွေတောင် တက်နေပြီ။ ဇွန်က မကာအိုကတောင် ပြန်မရောက်သေးဘူး :D
Ko Boyz Wed Mar 31, 01:56:00 AM GMT+8
ှShinlay Wed Mar 31, 02:31:00 AM GMT+8
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Wed Mar 31, 04:03:00 AM GMT+8
khin oo may Wed Mar 31, 06:35:00 AM GMT+8
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် Wed Mar 31, 09:01:00 AM GMT+8
ဗူးသီးနဲ့ ဖရုံသီး ဆိုပဲ... လိုက်ပါ့..း)
စာဖတ်သူကို ပျော်ရွှင်မှု ကူးစက်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်သူပါပဲ..
ဏီလင်းညို Wed Mar 31, 09:04:00 AM GMT+8
ဒို့ချစ်မကြီးက အလတ်ကြီးရှိသေး....အဲ့လေ... ငယ်ငယ်လေးဘဲရှိသေးဒါကိုး.......း))
Vista Wed Mar 31, 09:49:00 AM GMT+8
ပဲဝါလေး သေးနေပါသည် မှန်း၍ကြည့်သွားပါသည်
အလွန်ချစ်ချာကောင်းပါသည် ။ ဘာလီတော့သွားအုံးမှပါ ..ကမ်းခြေဆိုအရူးအမူးကြိုက်တယ် ..
P.Ti Wed Mar 31, 10:22:00 AM GMT+8
ပျော်စရာကြီး။ တမတ်တန်ပေမယ့် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရတော့ အမှတ်တရပေါ့။
အမက ပေါသလောက် ချောတယ်နော်...
မုန့်တွေအများကြီး ၀ယ်လာမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်။ :P
Thant Wed Mar 31, 10:38:00 AM GMT+8
ဖတ်လိုက်... calculator တစ်လုံးနဲ့ တွက်ကြည့်လိုက်...ဒါလေးများ....ဟား...ဟား... :D
Thant Wed Mar 31, 11:54:00 AM GMT+8
စာဖတ်လိုက် calculator နှိပ်ကြည့်လိုက်....ဒါလေးများ....ဟား...ဟား... :D
မောင်မိုး Wed Mar 31, 03:13:00 PM GMT+8
ဗျို့ ဂျီးဒေါ်...ဘယ်မှာလဲ ၀က်နေလှန်းထားတဲ့ပုံတွေ။ လျှိုမထားနဲ့နော်။ ဗူးသီး၊ ဖြဲသီးစာရင်းထဲ ၀င်မှာ စိုးလို့လား။
nu-san Wed Mar 31, 04:33:00 PM GMT+8
အမရဲ့ ဘာလီ ခရီးစဉ်က ပျော်စရာကြီး.. စစချင်း ပိုက်ဆံဈေးနှုန်းတွေ မြင်ပြီး လန့်နေတာ... နောက်မှ ၆၄၀၀နဲ့စားကြည့်ဆိုမှ တော်သေးတယ်လို့.. :D အမက ချောတယ်နော်.. (စင်ကာပူလာလည်ရင် မုန့်ဝယ်ကျွေး.. ;P)
beach ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားတယ် အမရေ.. နောက်ထပ် ဆက်ရန်တွေလည်း မျှော်နေတယ်..
အင်ကြင်းသန့် Wed Mar 31, 08:29:00 PM GMT+8
ငါ့အစ်မတောင် ပြန်ရောက်လာမှကိုး...ခရီးပန်းလို့ထင်ပါရဲ့ ပိုပိန်သွားသလိုပဲ...ဒါပေမယ့် ပိုလှလာပါတယ် :D (ဘာလက်ဆောင်ပါဒုန်း....:)))
Anonymous Wed Mar 31, 08:46:00 PM GMT+8
မင်္ဂလာပါ မချစ် ...
မချစ် လေသံ တုပြီး ပြောကြည့်မယ် “ ၀ဲလကမ်းဘဲ့ခ် တူ စင်း ဂပေါ်”
မိုးဦးစံပယ် Wed Mar 31, 09:54:00 PM GMT+8
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ရင်းအပျော်တွေကူးလာပြီး ကမ်းခြေတခုခုကို သွားချင်စိတ်ပေါ်လာမိတယ်။
မြစ်ချေသူ Wed Mar 31, 11:30:00 PM GMT+8
နာမည်နဲ့တစ်ချို့ ရေးထားတာလေးတွေကို ဖတ်ပြီး ခပ်၀၀နဲ့ အသက် ကြီးမှာပဲထင်ထားတာ... :P
လာလည်ရင်း ဘာလီရဲ့ အလှကို ကြည့်သွားပါတယ်ရှင့်။
khet myint myint Thu Apr 01, 02:33:00 AM GMT+8
ပျော်စရာခရီးဖြစ်ခဲ့မယ် ထင်ပါရဲ့.. ရေးမယ့်ပိုစ့်တွေလည်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ်.. ဒါ့ပုံကြည့်တော့ အသက်...ကြီးမှန်း..(အဲဒိလောက်)မသိသာ (သေးးး)...ဘူး..နော် :)
ချစ်ကြည်အေး Thu Apr 01, 08:28:00 PM GMT+8
ညီမ ဒဏ္ဍာရီရေ...ကြိုက်တာသာ စားသွားပါကွယ်...ပဲဝါလေးမို့လို့ပါ...နောက်တခါ ပဲဝါကြီးကျရင် ပုံကြီးကြီးတင်ပါမယ်...:)
နိူင်းရေ...ရွှေပုပ္ပါးလေး သောက်အိပ်ပါ ပျော်သွားမှာပါကွယ်...:)
အားကျရင် မိုရီယာမင်းသွင်းပါ မောင်လေးဇော်...:)
ညီမ လုလု...နှစ်တလက်မလောက်နဲ့ ရိုက်ရင်တော့ ပုံကြီးကြီး ထွက်လောက်ပါရဲ့ကွယ်...:)
ရိုစ့်ရေ...ရှစ်ရှာလေးဆို သျှစ်ရှားသီး နဲ့ ဦးသျှစ်သီးက မွေးထားတာလေ...)
ဂျစ်တူး မြင့်ဆို ထန်းပင်ပေါ် တက်ရေးတယ်လေကွယ်...ဟီး...ငယ်သယောင်ယောင် ထင်ရတာပါကွယ်...:)
ရောက်အောင် သွားစေချင်တယ် သိင်္ဂါ အရမ်းလှလို့ပါ...:)
ဝက်ဝက် အမက ဝိတ်အတက်အကျ မြန်တယ်...ဘာလီရည် သိတ်ရ...အိမ်လာခဲ့လေ...:)
ဒီတခါ သူ့ကို ဘာာာ !!! လို့ပြန်အော်ခဲ့တယ် မမဆီစိမ်...:)
တီရှပ်တွေ ပါလာတယ် ပြုံးပန်းရေ...အိမ်လာခဲ့...:)
မုန့်မုန့် တွေက မီးမီး သက်ဝေနဲ့ တည့်ဘူး ချိုတယ် ဆီများတယ် စားနဲ့နော်...:)
မမရွှေဇင် ပျော်တော့ ပျော်ပါ မီးနား မသွားပါနှင့်...:)
ညီမ ရီတာ မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်လိုက်ပါကွယ် ပါပါရာဇီတွေ ကြောက်လို့ ရုပ်ဖျက်ထားတာပါ...:)
ညီမ ဇွန် အမလည်း ဘာလီနေတုန်းပါပဲကွယ်...:)
ဘွိုင်းဇဇဇဇ အချစ်က မျက်စိမှုန်တယ်...:P
ပုံတွေလာကြည့်တာ ကျေးဇူးနော်...ရှင်လေး )
ဟမ် သာမီး ဂွတိုမှန်း ဘယ်လိုလုပ်သိ...ကိုကြီးကျောက် အရင်က ဘောင်းဘောင်း ချုပ်စားခဲ့တာ မှုတ်လား...:D
သေချာတယ် မမကွန် လူမှားပြီ...:(သာမီး အမြတ်ထွက်အောင် လုပ်နေတာလား...ဟင်...:)
ဟီဟိ ကိုရင်နော် ကလောင်နာမည် ပြောင်းချင်ရင်ပြော...ဘာအသီး ကြိုက်တုန်း...:)
ဟဲ့ တိုးတိုး ဏီလင်းရဲ့ ၂ ၁ နှစ် ...လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ တုန်းက...ဟိဟိ လန်းတုန်းပဲနော်...:)
ကပိတီ...ချမ်းလည်းချမ်းတယ် လွမ်းလည်းလွမ်းတယ် ရဲ့ ဗားရှင်းအသစ် ပေါလည်းပေါတယ် ချောလည်းချောတယ် ထွက်ပြီ (လောင်းဂိတ်)
ဒီ မောင်မိုးဟာ ဝက်တကောင်လုံးထွက်ပြနေတာကို ခြေရာရှာနေသေး...)
နုရေ...အမက မချောပါ သို့သော် ပေါ၏...၊ စလုံး လာခဲ့ပါ အဝတွင် ကျွေးပါမည်...:)
ညီမ အင်ဂျင်းရေ...ခရီးကတော့ ဟိုပန်း ဒီပန်းပါပဲကွယ်...လမ်းအလျှောက်များလို့ နဲနဲ ပိန်သွားတယ် ထင်ပါရဲ့...တီရှပ် ဦးရာလူ...:)
ဝဲကမ်းတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အကို မင်းခွန်စိုး...:)
မိုးဦးစံပယ်...ကမ်းခြေသွားပါ ခရီးထွက်ပါ...ပိုက်ဆံသာ မထွက်ပါစေနှင့်...
မြစ်ချေသူ...ခု ကျကျဆင်အောင် လွဲသွားပြီ ဆိုပါဒေါ့...
ခမမ...ဒါ အရှိအတိုင်းလေကွယ်...နဂိုင်းကြီးထွက်နေတာ တွေ့သမို့လား...မုဒိတာ ပွားစမ်းဘာာ...:)
ဘာလီခရီး အတူ လိုက်ခဲ့ကြသူများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ...:)
Moe Cho Thinn Fri Apr 02, 03:44:00 AM GMT+8
အလုပ်များနေလို့ ခုမှ စာလာဖတ်နိုင်တယ် မမရေ..
ပဲနီလေးက အချောလေးဗျာ..။ ဘယ်မှာ ၀ လို့တုန်း။ (ဒါမျိုး ကြားချင်နေမှန်း သိလို့ တမင် ပြောပါသည်)။ ဘေးနားက ပဲစင်းငုံလေးကျတော့ လက်ကလေးပဲ ပါသကိုး။
ဝေလင်း Sun Apr 04, 03:13:00 AM GMT+8
အစ်မကို ခုမပဲမြင်ဖူးရတော့တယ်။ ဒါတောင် သေးသေးလေးတင်ထားလို့ ချဲ့ကြည့်ရသေး.. ၀ိတ်လျှော့ဖို့တွေဘာတွေရေးနေလို့ ခပ်၀၀အောက်မေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အစ်မက သေးသေးလေးပဲ။ လူထက်စာရင် စာတွေက လူကြီးပုံပေါက်နေတယ် တကယ်။